प्रचण्डलाई सराप्दै ओलीको प्रशंसा गरेपछि यिनलाई ओलिले दिए यस्तो ‘बम्पर’ उपहार ! – Enepali Samchar
March 12, 2021 adminLeaveaComment on प्रचण्डलाई सराप्दै ओलीको प्रशंसा गरेपछि यिनलाई ओलिले दिए यस्तो ‘बम्पर’ उपहार !
e nepalisamchaar /काठमाडौं २८ फागुन झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबीच गोप्य सम्झौता गराएका छन् ।
बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले केयूको सभामा ठाडो निर्देशन दिएका थिए ।
प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल गत १८ गते उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वाचा गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट प्रसाईं तत्कालीन नेकपामा झगडा सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लागेका थिए ।
आफ्नो बहिनीलाई बचाउन जब ग्राहक बनेर भाई पुगे वेश्यालय घट्यो यस्तो घटना